Isu tinokudzidzisa iwe kufafiza internet neApple Watch | IPhone nhau
Imwe yesarudzo yatinayo paApple Watch kune avo vedu vane watchOS 5 yakaiswa ndeyekugona kutarisa internet kubva pawatch. Izvi hazviitwe kuburikidza neyakajairika app kana zvakananga kubva ku «Safari» yewatchOS zvinogoneka kuburikidza neWebKit API inouya muwatchOS 5.
Zviripachena kuti kukanganisika kwekutsvaga internet kubva kuApple Watch kuri pachena chaiko kubva pachiratidziro cheichi chishandiso pachayo, asi chakanakira imwe nguva inogona kugara ichibatsira kuwana mukana uyu ndosaka nhasi tichaenda kunoona. mashandisiro aungaita internet kubva kuApple Watch yedu.
Icho chete chinodikanwa kuve neWatchOS 5 kana kupfuura
Uye ndezvekuti vashandisi vanoramba vachishandisa iyo Apple Watch Series 0 kana yekutanga chizvarwa uye avo vasina kuvandudzwa havagone kuita basa iri sezvo chakakosha chinodiwa kwariri vane watchOS 5 yakaiswa paApple Watch. Zvakanaka, nezvakataurwa, ngatione kuti tingaite sei chiito ichi kubva kuApple Watch.
Chinhu chekutanga kutitumira isu zvakananga kubva kuMessage app chinongedzo kuGoogle.com kana chero imwe injini yekutsvaga
Iye zvino isu tinongofanirwa kuwana iyo Meseji muApple Watch app uye tinya pane ichangotumirwa
Nekudzvanya pabhawa yekutsvaga zvinotibvumidza kunyora tsamba netsamba kana kutaura kuti tiite kutsvaga uye ndizvozvo
Izvo zvakare zvinokwanisika kutumira zvakananga iyo webhu yatinoda kushanyira kubva kuMessage uye kuivhura paApple Watch, saka kana mumwe munhu akatitumira kero yewebhu tinokwanisa kuiwana kubva pawatch. Isu tinofanirwa kuyeuka kuti mamwe mapeji haapindirane kana anotora zvakananga kutora nguva yakareba kurongedza. Panyaya yeActualidad iPhone, chete ndiyo yekutanga nhau inoonekwa, asi pane mamwe mawebhusaiti zvinokwanisika kuzvitarisa kunyange neimwe nzira yakati rebei.
Chokwadi ndechekuti Haisi chimwe chinhu chinofamba mushe muApple Watch Series 1, 2 kana kunyangwe muChikamu 3Kune rimwe divi, muChikamu chechina zvinogona kupa iko kunzwika kuti kwakanyanya kuyerera kunyangwe chiri chokwadi kuti haisiyo inonyanya kukodzera kufamba nenzira. Iyi sarudzo yatinayo uye yakanaka kuziva asi kwete kuishandisa zuva nezuva, kure nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu tinokudzidzisa iwe kufafiza internet neApple Watch